[24 / 01 / 2020] Akpọrọ CHP maka mwepu ego maka ụzọ ndọrọndọrọ, okporo ụzọ na okporo ụzọ	34 Istanbul
[24 / 01 / 2020] TCDD anaghị alaghachi azụ na HiT na-akwụ ụgwọ ndekọ kwa ọnwa	06 Ankara
[24 / 01 / 2020] Ingwọ Speedgba Speedgwọ Ọgba Na-agba Ego Dị Mkpa Kwa ọnwa	06 Ankara
[24 / 01 / 2020] Kweta na BTS ka ị nyefee ahịa TCDD Tiketi Ndị ahịa na Ngalaba nkeonwe	06 Ankara
[24 / 01 / 2020] Shift2Rail Ozi Day Ihe omume	06 Ankara
Day: Ọktọba 17, 2019
A ga-ahazi Kahramanmaraş Book and Culture Fair, nke Ndi Isi Obodo ga-ahazi ya, 6 n’afọ a. Akwụkwọ na Omenala nke Kahramanmaraş Metropolitan nke a ga-enwe na 6 afọ a [More ...]
Obodo Eskişehir Metropolitan, nke bụ ihe atụ maka ọtụtụ ụlọ ọrụ, ọkachasị obodo nwere ọrụ n'okporo ụzọ dị larịị bidoro na ünönü n'afọ gara aga, na Science Work si Ankara na iwu nke Mansur Yavaş, onye isi obodo nke Ankara Metropolitan. [More ...]
Onye BEST Party Samsun osote Bedri Yasar, "Ekwesịrị imeghe ụzọ okporo ụzọ Samsun-Sivas (Bold) maka ọrụ ozugbo enwere ike," ka o kwuru. BEST Party Samsun Vice Bedri Yasar kwuru na nkwupụta, “Samsun-Sivas (Thick) train train [More ...]
Antalya mepere emepe, ọkachasị n'ụtụtụ mgbede nke okporo ụzọ, ihe fọrọ nke nta ka ọ kpọchigide ya na mgbanwerịta emere na Alanya Mola. Enyere izu ike na ụzọ gafere mgbe nhazi ahụ gasịrị. Antalya Metropolitan Municipality Ngalaba okporo ụzọ na Science nke Alanya [More ...]
Turkey nnukwu osompi maka Volkswagen ọhụrụ factory dị na Bulgaria, amụbawo okpukpu abụọ ya na-enye ọchịchị ịkpali. VW si management kwuru na Syria aghara metụtara arụmọrụ ke Turkey. German nnukwu ụgbọ ala Volkswagen (VW) iji guzobe [More ...]
Obodo Ankara na-aga n’ihu n’ịrụ ọrụ na-ewu okporo ụzọ n’ọtụtụ ebe n’obodo ahụ iji mee ka okporo ụzọ obodo ahụ belata ma dozie nsogbu njem n’obodo ndị ahụ. Ibute ebumnuche ndị ga-ebelata njupụta okporo ụzọ karịsịa n'oge elekere kacha elu [More ...]
Muğla mepere emepe 2019 na Muğla na 150 km n'ofe okporo ụzọ site na ịme ọrụ nke ụmụ amaala nyere. Kemgbe ụbọchị e hiwere ya na 2014, ọ na-enye nnukwu mkpa maka okporo ụzọ dị [More ...]
Ọgbọ erimeri Rackway mere eme dị na Brockville, Ontario, Canada mepere emepe maka njem nlegharị anya. Ọwara, nke bụ ụgbọ okporo ígwè kacha ochie na Canada, bidoro ịrụ ọrụ na 1854 ma tinye ya n'ọrụ na 1860, nwere mita 524 n'ogologo. [More ...]
A na-eme atụmatụ ka Bandırma-Bursa-Çanakkale-Bilecik rụọ ọrụ ụgbọ elu dị elu na 2021. A na-arụ ọrụ maka ọrụ Bandırma-İzmir, Bandırma-Bursa-Bilecik na-arụ ọrụ ụgbọ elu Bandırma-Çanakkale-Tekirdağ nke GMKA kwadebere. Mgbe emechara ọrụ ndị ahụ, 30 n'etiti Bandirma na Bursa, n'etiti Bandirma na Izmir [More ...]
Turgut Altınok, onye isi obodo Keçiören bụ onye sonyere na Mgbakọ Children'smụaka nke e mere na Keçiören Municipal Assembly n'ime ogo nke European Local Democracy Week, kwuru, sị, May Mee ka ịhụnanya na mmeri nwanne, Chineke gọzie mmadụ niile, ọkachasị ụmụaka, agha. [More ...]
A ga-eburu ndị ọrụ Niğde ọdụ na ọdụ ụgbọ ala 1 na 2 n'agbata Ọrụ Nrụpụta Ihe Nkịtị dị ala.
Onye isi oche Yolder Şakir Kaya na onye isi oche Suat Ocak mere ọtụtụ nleta na Ankara. Mehmet Soner Baş, onye otu anyị họpụtara dị ka osote onye isi nke Ngalaba Mmezi TCDD [More ...]
Onye isi obodo Ekrem İmamoğlu kwuru na ọ bụrụ na enyeghị ndị isi ọrụ Haydarpaşa na Sirkeci ọrụ, ọ gaghị ahapụ ọnụ ụzọ wee kpọkuo thelọ Ọrụ Mịnịstrị nke togbọ njem ka akagbuo ma nye ndị obodo IMM ebe ahụ. Ukwuu Istanbul [More ...]
Na Turkey, obodo ahụ nso gụnyere ngwa ngwa, adaba na ala njem maka inye ohere nke TCDD enyemaka nke Anatolia DMI mmepụta mere TÜVASAŞ National Train Set Usak Governor GỤKWUO ule mbanye [More ...]
Akpọrọ CHP maka mwepu ego maka ụzọ ndọrọndọrọ, okporo ụzọ na okporo ụzọ
Bọchị Ikpeazụ maka ndị agha Discount Travel Visas Jenụwarị 31
Ingwọ Speedgba Speedgwọ Ọgba Na-agba Ego Dị Mkpa Kwa ọnwa
Kweta na BTS ka ị nyefee ahịa TCDD Tiketi Ndị ahịa na Ngalaba nkeonwe
Ọnụọgụ nke ụlọ Green iji bulie ya na Sistem Asambodo Akwụkwọ Ahụike YeS-TR
Shift2Rail Ozi Day Ihe omume
Usesgbọ anụmanụ nwere ihu ọma na Kocaeli
Gịnị bụ Metrobus?